Izindatshana zikaJake Rheude zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UJake Rheude
UJake Rheude unguMqondisi Wezokukhangisa weRed Stag Fulfillment, indawo yokugcina izinto e-ecommerce ezalwe nge-ecommerce. Unesipiliyoni seminyaka ku-ecommerce nasekuthuthukiseni ibhizinisi. Ngesikhathi sakhe samahhala, uJake uyakujabulela ukufunda ngebhizinisi futhi ahlanganyele ngolwazi lwakhe nabanye.
Umsizi Wokuthenga Okubonakalayo: Ukuthuthukiswa Okulandelayo Okukhulu ku-ECommerce?
NgoLwesine, July 11, 2019 NgoLwesine, July 11, 2019 UJake Rheude
Kungo-2019 futhi ungena esitolo esidayisa izitini nodaka. Cha, lokhu akuyona ihlaya, futhi akuyona i-punchline. I-ECommerce iyaqhubeka nokuthatha ukulunywa okukhudlwana kuphayi wokuthengisa, kepha kusekhona izigaba ezingafinyeleleki uma kukhulunywa ngokuqanjwa okusha kanye nokusebenziseka kalula kwezitini nodaka. Omunye wemingcele yokugcina ubukhona bomsizi wesitolo onobungane, nosizo. "Ngingakusiza kanjani?" kuyinto esikujwayele ukuzwa